Amanqaku kaBonnie Crater kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UBonnie Crater
UBonnie Crater nguMongameli kunye ne-CEO ye Isangqa esipheleleyo sokuqonda. Ngaphambi kokujoyina i-Full Circle Insights, uBonnie Crater wayengusekela mongameli wentengiso yeVoiceObjects kunye nokuFezekiswa. UBonnie ukwabambe usekela-mongameli kunye nendima kasekela Mongameli kwiGenesys, Netscape, Network Computer Inc., salesforce.com, naseStratify. Igqala elineminyaka elishumi leOracle Corporation kunye neenkxaso zayo ezahlukeneyo, uBonnie wayengusekela mongameli, iCompaq Products Division kunye nosekela Mongameli, iCandelo leMveliso yamaQela.
Utshintsho kwidijithali: Xa iiCMOs kunye neeCIO zidibana, wonke umntu uyaphumelela
NgoLwesithathu, nge-20 kaJanuwari 2021 NgoLwesithathu, nge-20 kaJanuwari 2021 UBonnie Crater
Ukutshintsha kwedijithali kukhawulezisiwe kwi-2020 kuba kuye kwafuneka. Ubhubhane wenza ukuba iinkqubo zokuphambuka ekuhlaleni zifuneke kwaye zahlaziya uphando lwemveliso ekwi-Intanethi kunye nokuthengwa kwamashishini nabathengi ngokufanayo. Iinkampani ezazingenabo ubukho bedijithali obunyanzelekileyo zanyanzeliswa ukuba zikhule ngokukhawuleza, kwaye iinkokheli zeshishini zafudukela kwinxaso-mali kumnatha wonxibelelwano lwedatha eyenziweyo. Oku kuyinyani kwindawo ye-B2B kunye ne-B2C: Ubhubhane unokuba nokudlulisela phambili ngokukhawuleza kwimephu yendlela
Ngaba ucinga kwakhona ngokufikelela kwiNtengiso ye-B2B? Nantsi indlela yokukhetha amaphulo okuphumelela
NgoLwesibini, Meyi 19, 2020 NgoLwesine, Meyi 21, 2020 UBonnie Crater
Njengoko abathengisi behlengahlengisa amaphulo okuphendula kulwamkelo lwezoqoqosho oluvela kwi-COVID-19, kubaluleke ngakumbi kunangaphambili ukuba wazi ukuba ungabakhetha njani abaphumeleleyo. Imetrikhi egxile kwingeniso ikuvumela ukuba wabele inkcitho ngokufanelekileyo.
Isangqa esipheleleyo sokuqonda: I-Funnel Metrics kunye ne-Attribution ye-Salesforce
NgoMvulo, Februwari 11, 2019 NgoMvulo, Februwari 11, 2019 UBonnie Crater
Kwiinkampani ezininzi, ukuthengisa kunye nentengiso azisebenzi kwinqanaba lokudlala. Imisebenzi yokuthengisa ye-B2B ineenkqubo zeCRM ezinje ngeSalesforce yokulinganisa intsebenzo, kubandakanya iimetwork zenkampani zizonke kunye neenkcukacha zegranular yeqela kunye nokusebenza komntu ngamnye. Ukusukela ukuba inkqubo yeCRM isebenza njengenkqubo yerekhodi yengeniso kwiinkampani ezininzi, iqela lokuthengisa linedatha ethembekileyo kwi-C-suite. Amaqela entengiso asebenzisa izisombululo ezahlukeneyo zemartech ukuzenzekelayo kwimikhankaso kunye
Kwi-2018, idatha iya kubangela uQoqosho oluKhulayo
NgoLwesithathu, uDisemba 20, 2017 UBonnie Crater
Ithemba lobukrelekrele bokuzenzela (AI) lokutshintsha yonke into evelise i-buzz ebonakalayo kwizangqa zentengiso kwi-2017, kwaye oko kuya kuqhubeka kwi-2018 nakwiminyaka ezayo. Izinto ezintsha ezinje ngeSalesforce Einstein, i-AI yokuqala ebanzi yeCRM, iya kuthi inike abaqeqeshi bezentengiso ukuqonda okungazange kubonwe ngaphambili kwiimfuno zabathengi, bancede iiarhente zenkxaso ukusombulula iingxaki ngaphambi kokuba abathengi bazibonele kwaye bavumele ukuthengisa benze amava abo kwinqanaba elingenakwenzeka ngaphambili. Olu phuhliso lukhokelela kumda ophambili we
Izityhilelo ezi-4 onokuzifumana ngeDatha yeNtengiso
NgoLwesibini, Agasti 18, 2015 NgoLwesine, Novemba 5, 2015 UBonnie Crater
Bathi iCRM iluncedo kuphela njengedatha ekuyo. Izigidi zabathengisi zisebenzisa i-Salesforce, kodwa bambalwa abanokuqonda okuqinisekileyo kwedatha abayitsalayo, zeziphi iindlela zokulinganisa, ezivela phi, kunye nokuba bangathemba kangakanani. Njengoko intengiso iqhubeka nokuqhutywa ngakumbi ziidatha, oku kuphakamisa isidingo sokuqonda okwenzekayo ngasemva kwezehlo ngeSalesforce, kunye nezinye izixhobo. Nazi izizathu ezine zokuba kutheni